Mareykanka: “Duullaanka Soomaaliya Waxaa Nooga Baxday $ 5.3 Bilyan 20ki Sano Ee Tagtay Natiijana Kama Heyno” – Shabakadda Amiirnuur
Maxaa Cusub, Uncategorized, Wararka Dibadda
August 31, 2020 9:56 am by admin Views: 60
Dowladda Mareykanka ayaa quus aad u liidata ka muujisay duullaankeeda ay kusoo qaaday Soomaaliya oo socda muddo ka badan 20 sano, kaasoo hadba marxalad soo marayay.
Xukuumadda Washinton waxay sheegtay in dagaalka Soomaaliya oo kaliya ay ku bixisay adduun lacageed oo gaaraya $ 5.3 bilyan 20-kii sano ee lasoo dhaafay.
Hadalkan ayaa waxaa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ka hor jeedisay ku simaha safiirka Mareykanka ee UN-ka, haweeenyda lagu magacaabo Cherith Chalet, iyadoo carrabka ku dhufatay in lacagtan faraha badan iyo natiijooyinka ka soo baxa Soomaaliya aysan haba yaraatee wax isku qalma ahayn.
“Mareykanku wali wuxuu adeegsanayay duqeymo isagoo rajeynayay inuu ku dhufto shakhsiyaadka muhiimka ah ee islaamiyiinta Al-Shabaab– Hase yeeshee waxaa shaki la’aan ah in tallaabooyinkan milatari aaney ahayn xalka kaliya ee looga guulaysan karo Al-Shabab,” sidaasi waxaa ku calaacashay Cherith Chalet.
Dhawaan Taliska Africom oo war isku yaacsan kasoo saaray duqeyn uu ka geystay Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in dagaal aan looga adkaan karin Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Maraykanka waxaa uu walaac xoogan ka muujiyay isku filnaanshaha dhaqaale ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sida ay awood ugu leedahay iney beegsato meelo halbowle ah sida, weerarkii Hotel Elite uu tusaale usoo qaatay kaasoo lagu beegsaday dad ka tirsan DF oo ka shaqeynayay danahooda.
Sanandkan wuxuu Mareykanku Soomaaliya ka geystay 46 duqeyn oo dhana cirka ah kuwaasoo boqolkiiba wax ka badan sagaashan uu ku beegsaday dad maati ah oo aan dagaal ku jirin oo ay kamid yihiin caruur iyo haween, isaguna wuu dareensan yahay ineysan wax natiijo ah u lahayn sidaba laga dheehanayo hadalka qoomamada ah ee ay Chalet ka jeedisay xarunta Qaramada Midoobay.
Bishii Nov 5, 2019, Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Asheykh Axmad Cubar (Abuu Cubeyda) oo kasoo muuqday filimkii halkudheggiisu ahaa لغير الله لن نركع – oo lagu daawaday raggii fuliyay weerarkii ay ku go’een ciidamada Mareykanka iyo kuwa Yahuuda ee ku sugnaa Ballidoogle ayaa sheegay in Mareykanku uu dhaqaale badan iyo nafaf badan ku bixiyay duullaankiisa gayigan islamarkaana uusan gaarin wax natiijo ah, waxaana muuqata in Mareykanku uu maanta si cad u qiray hadalkaas.
Mareykanka, ayaa haatan doonaya inuu wax ka badalo istaraatiijiyaddiisa duullaanka Soomaaliya isagoo sheegay inuu xoogga sii saarayo tababarka ciidamo isaga u daacad ah oo wata magaca dowladda Federaalka iyo kuwa xambaarsan magaca shirkadihiisa calooshood u shaqeystayaasha ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sannadkan dowladda Mareykanka iyo shacabkeedaba jilbaha dhulka ugu dhuftay cudurka Karona kaasoo aan wali ka suulin inuu maalin walba si koox koox ah qubuuraha ugu dirayo una seexinayo isbitaalada.
Mareykanka ayaanan waligii guul kala tagin meel garaad jiro, waxaana uu wali wadaa inuu ka guurayo dalka Afganistaan isagoo waliba madaxa hoos u raaricinaya.